Sauna infrared isisindo ukulahleka. Izibuyekezo nomphumela
inqubo Ngempumelelo ezishisayo, esiza ukuthuthukisa isimo jikelele umzimba, kuyinto amaza okushisa. Ngeke uma kuqhathaniswa ne-X-ray noma ultraviolet. Lokhu emithonjeni enamanzi aphephile ukuthi amandla kudala izimo ezithambile zezulu lifudumeza womuntu ukushisa komzimba imisebe.
Njengoba inqubo ezengeziwe uhlelo jikelele isebenzisa i-sauna infrared isisindo ukulahleka. Izimpendulo ezivela kulabo sibonga usizo kuye ukuba anciphise umzimba, ukhulume imiphumela emihle kakhulu. Izikhathi ukwandisa kwegazi kanye nomphumela ozuzisayo kuwo wonke amasistimu umzimba. Ukuze yokuthola izikhungo nge ukwelashwa spa ngokuhamba jikelele ukwelashwa Kunconywa gumbi infrared. Izibuyekezo imisebenzi eziyinkimbinkimbi zokungcebeleka lapho kukhona sauna infrared, omuhle.
Inqubo ukushisa ukuchayeka
amaza okushisa ivela heater, okuyinto ifakwe gumbi esimisweni. Benza-ke ngokhuni, okuyinto kwakha sezulu emnandi ngaphakathi gumbi. Heat imisebe ezithathwe endaweni awulutho kuNkulunkulu. Ubude besikhathi isikhathi isigamu sehora i-lokushisa komoya ka 37-47 degrees. IR amandla lingena emzimbeni, ngokungafani sauna ezivamile futhi zokugeza, okuyinto abathukuthelela kuphela ebusweni. igazi Ukwandiswa flow sauna ezivamile kungenxa lokushisa eliphezulu ukuthi akuwona wonke umuntu okufanele. Sauna infrared Kunconywa ngisho nezinsana, kungenzeka ukuba nginakekele Esegugile, njengoba umthelela akusho ukulayisha uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi. Kuyasiza ukuthuthukisa muscle and bone izimo, kuthuthukisa isimiso somzimba sokuzivikela. Kunconywa njengenhlangano Ngaphezu yokwelapha jikelele ekwelapheni iziyaluyalu neuropsychiatric, ngoba kusiza ukususwa voltage isimo sizoba ngcono.
sauna infrared isisindo ukulahleka
Izimpendulo ezivela kulabo, ngaphezu uhlelo isisindo ukulungiswa isebenzisa infrared, emihle. Esimisweni isigamu sehora e-sauna, kilojoule, kanye lapho uvivinya umzimba. Lokhu kungenxa yokuthi uma ngaphansi ukushisa komzimba ray sithuthukiswe kwegazi futhi umzimba ngcono noma slag abasafufusa. sauna infrared ihlukile evamile. IR amandla heats okungaphezu komoya, futhi aqondise ukushisa imisebe ngqo emzimbeni, okubangela womjuluko ngaphansi kwamazinga okushisa aphansi. Lokhu kuchaza iqiniso lokuthi eyehlukene Kunconywa sauna infrared. Neminye (izilinganiso uqinisekise) amaseshini IR ukuchayeka amandla futhi ziwusizo futhi ngempumelelo. Kodwa singenciki kuphela kuleli inqubo uma ufuna ukuqeda isisindo okweqile. nokudla kahle nokuzivocavoca, kanye nemikhiqizo yezimonyo in ayikwazi ezikhishiwe. Ngokuhlanganyela hlelo, olwakhiwe uchwepheshe wezokudla, i-sauna infrared elisetshenziselwa ukunciphisa umzimba, ukubuyekezwa abakhulumayo imiphumela emihle kakhulu, kuyadingeka. Izikhathi umthelela kujwayeleke umzimba, asize umzimba ohlanziwe ubuthi futhi ngenxa yalokho, kukhona ukuncipha isisindo.
Hardware Cosmetology: izindlela, ukubuyekezwa kanye namanani. Hardware Cosmetology ukwelashwa ebusweni nomzimba ekhaya
I-hydrogen peroxide. Kusetshenziswa imithi
"Ciprofloxacin" kanye notshwala: ukuhambisana, imiphumela side effects
I imfashini kunazo tattoo kulo nyaka. Yini imidwebo igcwele bakithi iningi lokhu?